Ufele ekhweni "obeyoqotha" - Ilanga News
Home Izindaba Ufele ekhweni “obeyoqotha”
Ufele ekhweni “obeyoqotha”
"Ubungafunga ukuthi kuqoshwa ifilimu bedubulana nobaba"
USHISWE wumlilo azibasele wona umyeni okuthiwa ugasele
ekhweni lakhe eSida-keni, eMsinga, ngoLwesibili ehlome ngesibhamu ethi uyola-nda ingoduso yakhe, abefuna ukuyendisela koyisemkhulu ngoba eyisola ngokuthi isiqo-mile kanti uzodubula umlamu wakhe, yena wathelwa othulini ngenhlamvu ngumukhwe wakhe, kwaphela ngaye.
UMnu Mtuseni Dlamini (35), kuthiwa ugila le mikhuba nje, bese kuphele iminyaka emibili behlala ngokwehlukana nengoduso yakhe, enguNkz Nompilo Khanyile (26), ngoba eyixoshile, wathi mayibuyele kubazali bayo bayoyiyala ngokuthi indoda iphathwa kanjani.
UNkk Sithelephi Khanyile, ongunina wengoduso, uthi bese kuphele iminyaka emibili indo-dakazi yakhe yabuya emendwe-ni ixoshwe nguMnu Dlamini.
Uthi ibuya nje, ubevele eyihlukumeza ngokuyishaya. Yize ibisibuyile, kodwa kuthiwa ibi-ngakutholi ukuphumula ngoba uMnu Dlamini ubeyifonela zonke izinsuku, ayisole ngokuthi isiqo-mile, aze ayesabise ngokuthi uzoyibulala nezingane zabo ezimbi-li ezingamawele.
UNkk Khanyile uthi indodakazi yakhe ibihlale yesatshiswa ngu-Mnu Dlamini ngokuthi naye uzomyisa kwagoqanyawo ngoba uhlu-lwe wukuyala indoda-kazi yakhe.
Kuthiwa ubebuye asonge nangokuthi uzo-dubula ingoduso yakhe nodadewabo omdala, uNkz Gcinile Khanyile, abemsola ngokuthi walekelela udadewabo ngokumthuthisa mhla ehamba emzini.
“Ufike ngeSonto ntambama engumuntu ozoncenga ukuba balu-ngise izinto benengoduso yakhe. Baphume-le ngaphandle bayo-xoxa emotweni. Siphu-mile saqalaza ngapha-ndle sabona ukuthi imoto kayisekho, sebehambile. Size sathola ucingo ngakusasa indo-dakazi yami isibikela ukuthi singethuki, ibithathwe wumyeni wayo ngenkani, kodwa isikwazile ukuphunyuka endlini yayocasha,” kuchaza uNkk Khanyi-le.
ILANGA libe selixo-xa noNkz Khanyile (ingoduso) othe uMnu Dlamini umphoqile ukuba bahambe bayo-xoxela kubo, okuthe uma befika endlini yakhe wadonsa induku ethi makakhulume lonke iqiniso, amtshele ukuthi useqome amadoda amangaki njengoba sebehlala ngokwehlukana nje.
“Ungishaye zaze zagcina sezingasaphumi izinye-mbezi, ethi mangisho ukuthi ngubani isoka lami elisha, ngi-mtshele nezesheli zami zonke.
“Ungiphoqe ukuba ngiye naye ocansini. Ngenxa yokuthi bengi-mbona ukuthi unodlame futhi uzongibulala uma ngiqhubeka nokulwa naye, ngigcine sengi-thambela yonke into abeyisho, wazitika ngami waze wafikelwa wubuthongo walala.
“Ngabo-4 ekuseni, ukusa kubonwe yimina, ngavuka nga-qamba amanga ngathi ngixinwe yisisu, ngidinga ukuya endlini encane. Nakhona lapho ngiphu-me engigadile. Ngize ngasizwa wukuba ngiqambe amanga ngithi ngiyokha amanzi emfule-ni, kwayima ethamba, ngakwazi ukuthola ithuba lokubaleka,” kusho uNkz Khanyile.
Uthi ubaleke wayobhaca emzini kadadewabo womyeni wakhe, wafike wambikela konke, wabe esecela ukuba amsize ukuze ezofonela
umndeni wakhe. Uthi uze wala-ndwa nguyise esehamba nama-phoyisa.
“NgoLwesibili ekuseni singazelele, sibone ngaye uMtuseni ekhaya elengise isibhamu ngesandla. Ungene ekhaya ethi uzoqotha imbokodo nesisekelo, esho nokuthi uzodubula umama, yimina, yizingane zami nodade-wethu. Kuthe uma ezama uku-ngidubula washweba, ngakwazi ukubaleka. Ngebhadi kudubu-leke iwele lami, uNhlanhlo, emqaleni, okumanje lisesibhe-dlela, lilimele kanzima.
“Ubaba uphume endlini yakhe ethuswa wumsindo wesi-bhamu, ngaleso sikhathi uMtu-seni ubelwisa bonke abantu, esho ukusiqeda sonke egcekeni ngesibhamu. Nakuba siyaphila nje, kusize ukuphuma kukababa.
“Ubungafunga ukuthi kuqo-shwa ifilimu ngesikhathi edubulana nobaba ngoba naye ube-ngazibekile phansi edubula.Kuze kwagcina ngokuba kudu-buleke yena, washonela egceke-ni ekhaya,” kusho uNkz Khanyile.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uColonel The-mbeka Mbhele, uthe amaphoyisa avule idokodo lophenyo kanti bekungakaboshwa muntu.
Previous articleUmphakathi ushise isikole eHluhluwe
Next articleKuboshwe uthisha ngelocansi